★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်မ ဓါးလှီးခံပြီး ကုသိုလ်ယူခြင်း
မွတ်ဆလင်မ ဓါးလှီးခံပြီး ကုသိုလ်ယူခြင်း
မွတ်ဆလင်ဘာသာကတော့ အောက်ပိုင်းကနေကို မတက်ပါဘူး။ အခုဓာတ်ပုံကတော့ မွတ်ဆလင်ပစ္စည်းကို ဓါးလှီးခံနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးဆိုပြီး မဆင်မချင်မကြည့်ပါနဲ့။ ထမင်းစားချင်စိတ်ပင် ပျောက်သွားနိုင်သည်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:17 AM
"မြန်မာနိုင်ငံ တစ် ဝှမ်း ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်များ. ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင် များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ် များအား ကျနော့် ဘက်မှ သတိပေး နှိုးဆော် ချက် နှင့် မေတ္တာရပ်ခံချက်"
ယခုအုပ်ချုပ်ဆဲဖြစ်သည့် စစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် သူ၏အပေါင်းအပါများသည် ၄င်းတို့၏ ခြစားနေသော ကုလားထိုင်ဆွေးကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် မိမိခြံစောင့်ခွေးများဖြစ်သည့် ဘုန်းကြီး အတုများကို အမှန်တကယ် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည့် သံဃာတော်များ အမည်ဖြင့် အစ္စလာမ်၊ ဗုဒ္ဓနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကြားတွင် မတရားသော နည်းလမ်းဖြင့် မြေခွေးပမာ ယုတ်မာကောက်ကျစ်လှသည့် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များဖြင့် အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များကို တစ်ဖက်သတ် နှိမ့်ချ ပြောဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကြားတွင် ဒီဝဘ်ဆိုက်ထဲမှာ ရန်တိုက်နေကြသည်ကို မိတ်ဆွေတို့ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ အနေနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စိတ်ဝမ်းမကွဲပဲ ညီကိုရင်းများပမာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ တစ်ဦးလက်ကို တစ်ဦး ကျစ်ကျစ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင် အဖိုးကြီးသန်းရွှေနဲ့ သူ့အပေါင်းအပါ မြေခွေးတို့၏ ကုလားထိုင်သည် ခြစားနေရင်းမှတဖြည်းဖြည်း ပြိုကျသွားမည်သာ ဖြစ်သည်။
ကျနော့် အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်သည်မှာ- ဗုဒ္ဓအစစ်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့သည် ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့နှင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အမြင်မမှားစေပဲ ညီညီညာညာနှင့် လက်တွဲပြီး ယုတ်မာကောက်သော မြေခွေးများအား တညီတညွတ်တည်း ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ကြပါရန်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်ကို ပြန်လှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစ္စလာမ်နဲ့ ဗုဒ္ဓအစစ်တွေဟာ ဘယ်သောအခါကမျှ ရန်ညှိုးမဖွဲ့ဖူးခဲ့ကြသလို အစ္စလာမ်နှင့် ခရစ်ယာန်များသည်လည်း ယနေ့တိုင် ရန်ညှိုးထားခြင်းနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိဖူးသေးပါ။
သို့သော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဤမြေခွေးအစိုးရဝင်လာပြီး မိမိခြံစောင့်ခွေးများဖြစ်သည့် သံဃာအတုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်အသီးသီးမှာ ရှိကြသည့် အစ္စလာမ်နှင့် အစ္စလာမ့်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး အစ္စလာမ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာများအား ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစေရန် ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
ယခုလည်း (အလက်ရှင်) ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အကြောင်းပြစရာ အကြောင်းခံတစ်ခုကို ဖန်တီးသောအားဖြင့် ရန်တိုက်ကာ နိုင်ငံမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး ရေရှည်စီမံကိန်းနှင့် ရေရှည်ဆက်ထိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြလေပြီ။
မိတ်ဆွေတို့ ဒါတွေကို သတိထားမိကြရဲ့လား? ယခုဖြစ်နေသော အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အပြင်ပန်း ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာသာရေးလိုလိုနဲ့ အတွင်းကျကျကြည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံရေး သက်သက်ချည်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ လက်ရှိသူတို့ပြောနေတာတွေဟာ အစ္စလာမ်မှာမရှိပါဘူး။ သွားပုပ်လေလွင့် ကြံဖန်ပြောဆိုနေခြင်းသာပါ။ ပြီးတော့ အစ္စလာမ်ရဲ့အထွဋ်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလည်း ကျမ်းတော်၏ စာသားအတိုင်းမဟုတ်ပဲ လိုတိုး ပိုလျှော့လုပ်ကာ စော်ကားထားကြပေသည်။ ဒါတွေကိုတော့ နောက်အချိန်ရရင် ရသလို ရှင်းပြသွားမှာပါ။
သူတို့အစ္စလာမ်သာသနာကို စော်ကားတာတော့ ဘာဆန်းလို့လဲဗျာ။ သူတို့ ဦးချ ရှိခိုးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတောင် သူတို့ရဲ့ကုလားထိုင်ကြောင့် နိုင့်ထက်စီးနင်း ပြုခဲ့ကြသေးတာပဲ။သံဃာတော်များကိုဆိုရင်မျက်နှာတွေနဲ့ခေါင်းတွေကိုပါ စစ်ဖိနပ်တွေနဲ့ရက်ရက်စက်စက် ကန်ကျောက်ပြီး အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲ ဖြစ်စေခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ။
ခင်ဗျားတို့သိပ်ပြီး ယုံကြည်လေးစား အမြတ်တနိုးထားကြတဲ့ဘုန်းကြီးပေါင်းမြောက်မြားစွာတို့ကို မတရားသဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ။
ဒီလောက်ဆို ခင်ဗျားတို့လည်းသဘောပေါက်ကြရောပေါ့ဗျာ။ တကယ်လို့ ဆွေးနွေးချင်သူများရှိရင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီကိုကြွမြန်းလာနိုင်ပါတယ်bravohsm786@gmail.com
(အမှန်တရားကို ခုံမင်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦး)